Odayaasha dhaqanka Cadaado oo ka hor yimid dhismaha maamul ee ka bilaawday Dhuusamareeb – Hornafrik Media Network
Odayaasha iyo waxgaradka magaalada Cadaado oo maanta kulan iskugu yimid ayaa cadeeyey inaysan jirin cid ku matalaysa dhismaha maamulka Galmudug oo haatan ka bilaawday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
Waxgaradka magaalada Cadaado ayaa sheegay in liiska odayaasha soo xulaya xildhibaanada cusub ee maamulka Galmudug oo Sabtida maanta ah ay guddiga farsamada ku wareejisay wasaaradda arimaha gudaha aysan reer Cadaado cidna ku maralin, iyagoo dowladda ku eedeeyey inay dhegaha ka fureysatay tabashadooda.
Odayaasha ayaa ku goodiyey inaysan ka qeyb gali doonin dhismaha maamulka Galmudug ilaa laga xaliyo tabashadooda, iyagoo ka digay in maamul aan loo dhamay laga dhiso magaalada Dhuusamareeb.
Liiska 44 oday ayey maanta guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug u gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo iyadu garwadeen ka ah dhismaha maamulka, waxaana isla maanta la xareeyey odayaashaas si ay u bilaabaan soo xulidda xildhibaanada cusub ee maamulka Galmudug.
Maxay tahay sababta Nabadoonada loogu xiray Boosaaso?